Ihelikopta kunye nenqwelomoya yabhideka imida eArizona ibulala abantu aba-2
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ihelikopta kunye nenqwelomoya yabhideka imida eArizona ibulala abantu aba-2
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ingozi yengozi yenzeke ngolwesiHlanu kusasa kufutshane nesikhululo senqwelomoya sikaMasipala waseChandler, esikwihlomela ledolophu yaseArizona iPhoenix.
Ukudibana kweMidair phakathi kwehelikopta kunye nenqwelomoya yempiko eyenzekileyo yenzeka kufutshane naseMcQueen naseQueen Creek eArizona.
Inqwelomoya yakwazi ukuhlala ikhuselekile kodwa ihelikopta yatshayisa yatshisa, yabulala abantu aba-2 ababekhwele kuyo.
Ingozi embi yeza kwiinyanga ezintathu emva kwenye ingozi yenqwelomoya encinci kwisikhululo senqwelomoya sikaMasipala waseChandler.
Ihelikopta kunye nenqwelomoya encinci zangqubana phakathi kwesiza kufutshane neChandler Airport Arizona.
I-chopper ehliweyo kufutshane nesikhululo senqwelomoya sikaMasipala iChandler eArizona
Inqwelo-moya ikwazile ukuhlala ngokukhuselekileyo, kodwa ihelikopta yatshayisa yadangazela.
Bobabini ababekhwele kwihelikopta babulawa, ngelixa abakhweli beenqwelomoya bemka bengenzanga.
Ingozi yengozi yenzeke ngolwesiHlanu kusasa kufutshane nesikhululo senqwelomoya sikaMasipala waseChandler, esikwihlomela ledolophu ArizonaIsixeko esilikomkhulu Phoenix.
Umphathi we-Chandler Fire Battalion u-Keith Welch uqinisekisile ukuba babini abantu ababekhwele ihelikopta babulawa, ngelixa abakhweli benqwelomoya, inqwelomoya ehamba ngenqwelomoya, bengafunanga ngonyango.
Akukho mntu emhlabeni owenzakeleyo.
Iimeko zengozi leyo azikacaci, kwaye amapolisa aseChandler akhuphe umnxeba wamangqina kunye nevidiyo yezehlo.
Imifanekiso ekwabelwana ngayo ngoonondaba bendawo kwangoko emva koko ibonisa inqwelo moya ekumeni ecaleni komgaqo weenqwelo-moya, kucaca ukuba uhleli ngokupheleleyo.
Imifanekiso eyahlukeneyo ibonisa intsalela yehelikopta kwinto ebonakala ngathi yindawo yenkunkuma, egutyungelwe ithafa ngabasebenzi bakaxakeka.
Ingozi embi yeza kwiinyanga ezintathu emva kwengozi yenqwelomoya encinci kwisikhululo senqwelomoya sikaMasipala waseChandler. Emuva ngoJulayi, injini enye ye-Beechcraft Bonanza B36 kunye nabantu abane ababekhwele apho yatshayisa yaza yatsha nje kwakamsinya emva kokuba isukile, yathumela umntu owayehlala esibhedlele wenzakalisa abanye abathathu.